Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. जोर्डनमा आँधी र बाढीमा परी २१ को मृत्यु, २ मन्त्री पदमुक्त – Emountain TV
जोर्डनमा आँधी र बाढीमा परी २१ को मृत्यु, २ मन्त्री पदमुक्त
एजेन्सी , १९ कात्तिक । जोर्डनमा वर्षा ,आँधी र बाढीको चपेटामा २१ जनाको मृत्युपछि २ जना मन्त्रीले दिएको राजीनामा जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्धितीयले स्वीकृत गरेका छन् । राजीनामा स्वीकृत हुनेमा पर्यटन र शिक्षा मन्त्री रहेका छन् । सरकारले बिपदमा राहत र उद्धारमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएपछि उनीहरुलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
वर्षा , आँधी र बाढीले जोर्डनमा हालै २१ जनाको मृत्युभएपछि सो प्राकृतिक विपतिमा जोड्न सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको स्विकार गरेको छ । सो घटनामा मृत्यु हु्नेमा स्कुल बसमा यात्रा गरिरहेका विद्यार्थी र शिक्षकहरु छन् । घटनामा दर्जनौ व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए ।
समयमा उद्धार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेका पर्यटन मन्त्री लेना अन्नब र शिक्षा मन्त्री आजमी महाफजले राजिनामा दिएका थिए । राजा अब्दुल्लाह द्धितीले ति दुवै जना मन्त्रीको राजिनामा स्विकृत गरेका छन् । संसदीय र जन दवावका कारण मन्त्रीहरुले आ– आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएपछि सरकारको आलोचना मत्थर भएको छ ।
जोर्डनका राजाले न्याय मन्त्री बासम समीर तलहौनीलाई कार्यबाहक शिक्षा मन्त्री र राज्यमन्त्री मजद श्वेकेलाई कार्यवाहक पर्यटन मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । जोर्डनका जनताले देशमा दैवि बिपत्ति र आपतकालका बेला सरकारले पुुर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सानो तिनो बिपत्तिमा पनि राम्ररी भुुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने स्थितिले सरकारको कमजोरी देखाउने हुदा त्यस तर्फ बेलैमा सचेत हुुन जोर्डनका सर्वसाधारणले आग्रह गरेका छन् ।